ရွှေရောင်မှတ်တမ်း: October 2009
**ဘာကြောင့် ယောက်ျားလေးတွေက အချစ်ကို တန်းဖိုးမထားတတ်ကြတာလဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ.....
Posted by နှင်းပွင့်လေး at 10/31/20090comments Links to this post
* * * တမ်းတနေ့စွဲ * **
* * တိမ်တွေ ကြည့်ရင်းကွယ် * *
* * ကိုယ်အမြဲကြေကွဲ ငိုနေတယ် * *
* * အတူတူနေလေးတွေ * *
* * ပြန်တွေးမိရင် သိပ်လွမ်းတယ် * *
CHO : ( ** ချစ်အားလေးရယ် ငယ် **
** ရင်မှာသိုသိပ် မျက်ရည်ဝဲ **
** ကိုယ်တကယ်လွမ်း လွမ်းလို့လေ **
** အမြန်ဆုံးပြန်ခဲ့ ချစ်သူရယ် * *
* အတူနေတာတွေ ကိုယ်အမြဲလွမ်းနေတယ် *
* သိပ်ချစ်တယ် ရင်ထဲ ခိုနားလှည့်ပေါ့ကွယ် *)
* * အကြင်နာ စိတ်လေးတွေ * *
* * ပြန်တမ်းတရင် ငိုနေတယ် * *
* * ရန်ခုန်သိပ်မောတယ် * *
* * အချစ်အနမ်းတွေလည်း သိပ်လွမ်းတယ် * *
** အမြန်ဆုံးပြန်ခဲ့ ချစ်သူရယ် * *)
* * ရီဝေမျက်ဝန်းရယ် ငိုခဲ့တာလဲ ကြာပြီပဲ * *
* * ဘယ်လိုဘာကြောင့်ကွယ် * *
* * အဖော်မဲ့ကြေကွဲအနေခက်တယ် * *
* * ဘယ်အထိချစ်မှာလဲ * *
* * ဒီလို အချိန်တိုင်း မေးသူရယ် * *
CHO: ( ** ကိုယ်တကယ်လွမ်း လွမ်းလိုလေ့ * *
** အမြန်ဆုံး ပြန်ခဲ့ချစ်သူရယ် **
** ကြင်နာတာတွေ မေ့မထားလိုက်ပါနဲ့ **
** သိပ်ချစ်တယ် ရင်ထဲခိုနားလှည့်ပေါ့ကွယ် **
Posted by နှင်းပွင့်လေး at 10/30/20090comments Links to this post
Labels: နှင်းပွင့်လေးသိပ်ကြိုက်တဲ့ သီချင်းစာသာလေးတွေ
* * * * အပြစ်မမြင် * * * *
- * - နှုးညံ့နွေးထွေးသလို အကြည့်လေးများထဲ - * -
- * - တင်ထားမယ် တို့စိတ်ကူးတွေ အခိုးအငွေ့ဖြစ်ကာရယ် - * -
- * - နှလုံးသားဟာ ပန်လိုဝေကကျတယ် - * -
- * - မနေ့က မင်းသတင်းတွေ ဒို့ကြားလည်း - * -
- * - မမေးဘူး တိုးတိတ်စွာ မျိုသိပ်ပါ့မယ် - * -
- * - အားလုံးဟာ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ သတိပေးကြပေမယ့် - * -
- * - ကြားစကားလို့ရင်မှာ ယုံထားမယ် - * -
Cho : ( ** အပြစ်မမြင်ပါဘူး ချစ်ချင်တာပဲ သိတဲ့နောက် **
** ဖြစ်သမျှဟာ အကောင်းဆုံးပဲပေါ့ **
** မင်းရင်ခွင်နဲ့ ခွဲခွာနေဖို့မရဲပါဘူး **
** အနားနားမှာ အမြဲရှိပါရစေ ** )
- * - အချစ်က အသိခက်တဲ့ ကဗျာလေးပဲ - * -
- * - ခွင့်လွှတ်ချစ်တတ်အောင် တို့ကြိုးကြည့်တယ် - * -
- * - လျှို့ဝှက်ချက်များစွာထဲမှာ အမြဲတမ်းတ၀ဲလည်လည် - * -
- * - မှားလည်းလေ မှားပါစေတော့ကွယ် - * -
*** malwan thin chin pyaw mal ***
**** မလွမ်းပဲ မနေနိုင်အောင် မင်းလုပ်ခဲ့တယ် ****
**** မချစ်ပဲ မနေနိုင်အောင် မင်းရဲ့ အပြုံးတွေ ****
**** နှလုံးသား ဒဏ်ရာတွေ မင်းမပေးဘယ်နဲ့ ****
**** ရရှိခဲ့တာ ဘာကြောင့်လဲ *****။
**** ချစ်ခဲ့တာတွေ ကိုယ့်အမှားများလာကွယ် ****
**** ဖွင့်ပြောဖို့ဆိုတာ ကိုယ်မှ မဖြစ်ခဲ့တာ *****
**** ဆုံးရှုံးမှာကို ကြိုတွေးမိခဲ့လည်း *****
**** မင်းမသိအောင် ချစ်မယ် ******။
Cho : (*** တကယ်ဆို မင်းနာလည်းမှာပါ အချစ်ရယ် ***
**** ခင်မင်မှု့ ... အရောင်များ ပြက်ပျယ် ****
*** ဒီလိုနဲ့ ဝေးမှာကို ကြိုသိလဲ ..အချစ်ရယ် ****
*** ယုံကြည်ပါ သီးချင်းလေးက ပြောလိမ့်မယ် ****)
**** မှတ်မိနိုင်စရာ ညလေးရှိခဲ့တယ် ****
**** မင်းနာလည်းရင် အပျော်ဆုံးမက်ခဲ့တယ် ****
**** ဘယ်သူမှ မမြင်အောင် ကိုယ်ချစ်ခဲ့မိလည်း *****
**** နှလုံးသားလေးရယ် ဘယ်လိုဖြေမလဲ ****
**** ဆုံးရှုံးမှာကို ကြိုတွေးမိခဲ့လဲ *****
မင်းကိုချစ်တဲ့ သွေးတွေ ငါ့နှလုံးသားထဲ
ငါ့ရင်ဘက်ထဲက နင့်အတွက် တစ်စုံတစ်ရာ
အမြဲတမ်းတော့ ချစ်တယ် ...
***** သင်ဟာ ဘယ်ရာသီဖွားလဲ***** ဖတ်ကြည့်နော်။
-- မိဿအချစ်ဒဿန (ARIES)
နှလုံးသားပိုင်ရှင်၊ မြင့်မြတ်သော အချစ်ရှိသူ\_\_\_"ဟု ဖော်ကျူးထားသည်။
\_\_\_"အလွန်အချစ်ခံလိုသော အချစ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။အချစ်အားလိုလားသည်။
မိမိအပေါ် အေးအေးချမ်းချမ်း သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ နူးနူး ညံ့ညံ့ အလေးပေး၍
ဆက်ဆံသူအား လိုလားသည်။ ထို့အပြင် သနားချစ်၊အားနာချစ်ကိုလည်း
နှလုံးသားနှင့် ဆုံးဖြတ်တတ်သည်။ အချစ်အတွက် ဘာမဆိုပေးဆပ်ရဲသော
သတ္တိရှိသည်။ တဇွတ်ထိုး လုပ်ခြင်း ၊စိတ်ဒေါသကြီးခြင်းများ ရှိလင့်ကစား
အိမ်ထောင်ကျမည်။ အချစ်ဦးနှင့် ဆုံစည်းကိန်းမရှိ။သို့သော်
မေတ္တာတရားအား ဆုံးဖြတ်သောအခါတွင် သေချာစွာ အချိန်ယူဆုံးဖြတ်ပြီးမှ
ချစ်တတ် တွယ်တာတတ်သည်။ ပြောခဲ့သောစကား၊ ဆုံးဖြတ်ထားသော အရာအား ဘယ်တော့မှ
ပြန်မပြင် ၊ သစ္စာတရားအား ရင်ဝယ်ပိုက်ထားသူဖြစ်သည်။
အချစ်မြဲသည်။ အချစ်အတွက်ဆိုလျှင် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်
ဆန့်ကျင်ရန်လည်းကောင်း၊ မိသားစုနှင့်ဆန့်ကျင်ရန်လည်းကောင်း ဝန်မလေး။
ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်မည်။ မေတ္တာလမ်းကြောင်းသည် မချောမွေ့ အခက်အခဲများမည်။
ချစ်သူနှင့်ပေါင်းဖက်ရန် ဆုံစည်း ရန်သာအဓိကထားသည်။ အပျော်ချစ်သူ
နှလုံးသားမှ အချစ်သည် သံယောဇဉ်အတွယ်အတာမှ တစ်စစ မြင့်မားလာသော
တိုးပွားလာသော ချစ်တတ်လာသော မေတ္တာအမျိုးအစားဖြစ်သည်။
တခါတည်းထား တစ်ကြိမ်တည်းမြဲလိုသော ချစ်သူကိုလိုလားသည်။ သို့သော်
ဤရာသီဖွား ၈၀% သည် အချစ်ဦးနှင့်ဆုံစည်းကိန်းမရှိတတ်ပါ။
အချစ်အပေါ် ထားရှိသော ဒဿနအမြင်သည် အသက် ၁၆ နှစ်မှ ၂၂ နှစ်အတွင်း မိမိကို
တစိုက်မတ်မတ် စိတ်ဝင်စားသော နီးစပ်သူနှင့် သံယောဇဉ် တွယ်ပြီး
နီးစပ်မှုကြောင့် မေတ္တာတရားပေါ်ပေါက်သည်ဟုသတ်မှတ်သည်။ အသက်၂၃ မှ ၂၈
နှစ်ကြားတွင် ချစ်သူထက်မိဘကို ပိုချစ်သင့်သည်ဟူသော စိတ်ရှိသည်။ အသက်
မေထုန်ရာသီဖွားတို့၏နှလုံးသားချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် တစ်ပါးသူက မိမိအား မည်မျှ
နှစ်သက်မည်။ မိမိနှင့် တိုင်ပင်ဖော် တိုင်ပင်ဖက်အဖြစ်
ရပ်တည်နိုင်သောသူကို ဘဝအဖော်အဖြစ် ဦးစားပေး၍ ရွေးချယ်တတ်သော
ထိုကဲ့သို့ရွေးချယ်ရန်ကြုံလာပါက ဦးဏှောက်ကို ဦးစားမပေးပဲ နှလုံးသားမှ
တောင်းဆို လာသည့်အပေါ် ရဲရင့်ပြတ်သားစွာ ဆုံးဖြတ်မည့်သူဖြစ်သည်။
ပင်ကို စရိုက်တွင် တစ်ပါးသူက အခက်အခဲများ အချစ်ပြဿနာများကို မိမိက
ဦးဆောင် ဖြေရှင်းနိုင်သလောက် မိမိကိုယ်တိုင်အတွက်မူ အကြံပေးနိုင်သူ
ဘဝအားရင်ဆိုင်မည့်အပေါ်ထားရှိရမည့်ခံစားချက်ဟု သတ်မှတ်သည်။ အသက်၃၀
နှစ်အထက်တွင်မူ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ တရားသည် ကျယ်ပြန့်စွာ နှင့်
ကရကဋ် ရာသီဖွားများသည် အလွန်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သော အချစ်ကိုလိုလားသောသူဟု
ရင်ခုန်ချင်စရာ၊ စိတ်ကူးယဉ်စရာအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်သမိုင်းထဲမှ
အချစ်သူရဲကောင်းများအား သဘောကျ အားကျတတ်သော
မျဉ်းကြောင်းငယ်လေးမျှသာဖြစ်သည်။ တစ်ပါးသူအပေါ် သံယောဇဉ်ထားမိ၊ ချစ်မိ
၊တွယ်တာမိလျှင် အရာရာပေးဆပ်တတ်သလောက် မုန်းပြီဆိုက လုံးဝလှည့်မကြည့်တတ်။
ဒုက္ခပေးထား၊နှိမ့်ချဆက်ဆံထားသော သူများအပေါ် အခါသင့်လျှင်
တစ်စုံတစ်ရာ မိမိနှလုံးသားကိုနာကျင်ထိခိုက်အောင် တဖက်သူမှပြုလျှင်
ချက်ချင်းမုန်းတီးအရွဲ့တိုက်တတ်သော အချစ် နှလုံးသားဒဿန ရှိသည်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာအပေါ် အထိမခံ၊ အလွန်တန်ဖိုးထားတတ်သော သူဖြစ်သည်။ သို့သော်
မေတ္တာရေးတွင် မချောမွေ့၊ကံခေတတ်သော သဘာဝကို ပိုင်ဆိုင်သည်။ အချစ်ဦးနှင့်
ထူးခြားချက်မှာ အချစ်ဆုံးသူနှင့် အိမ်ထောင်ကျမည်။ မိမိ၏
ပေးဆပ်ရန်ဝန်မလေး။ပေးဆပ်ခွင့်လွှတ်တတ်သော သဘောထားကြီးသော နှလုံးသားကို
ဘဝကြင်ဖော်အဖြစ် ရွေးချယ်လိမ့်မည်။ကံခေသည်မှာ ဤရာသီဖွားများသည်
အချစ်ဆုံးသူနှင့် ကွေကွင်းရတတ်သည်။ မာနကြောင့် အချစ်စစ်ချစ်သူနှင့်
ပဋိပက္ခဖြစ်နေဆဲ၊ အားနာ သနားခွင့်လွှတ်တတ်သော မိမိသဘာဝကို အခြားသောသူက
အခွင့်အရေးယူ၍ အညှာကိုင်ကာ လက်ထပ်ရန် တိုက်တွန်းခံရတတ်တသည်။ အချစ်ဆုံးသူ
တစ်ယောက် ၊ လက်ထပ်ဆုံစည်းသူကတစ်ယောက် ဖြစ်တတ်သည်။
ဖန်တီးနိုင်သည့် စွမ်းအား တစ်ရပ်ဖြစ်သည် ဟူသော သဘောထားအား ရင်မှာ ထာဝရ
ပိုင်ဆိုင်သူများဟု ဖော်ကျူးထားသည်။ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာပြီးမှ စနစ်တကျ
နှလုံးသားကို ပိုင်ဆိုင်သည်။မာမာပြောဆိုဆက်ဆံလျှင် မိမိအတွက်
အကျိုးရှိသော စကားပင်ဖြစ်လင့်ကစားလက်မခံ။ အချော့ကြိုက် ၊ အပျော့ကြိုက်
မိမိအား ဦးစားပေးဆက်ဆံမှုကို လိုလားသော အချစ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။
မိမိနှလုံးသားကို မိမိကိုယ်တိုင် ခုတုံးလုပ် ချနင်းပစ်ရန် ဝန်မလေး။
မိမိဘဝ တိုးတက်မှုကို ပံ့ပိုပေးသူများအပေါ် အချစ်မေတ္တာထားမည်။
ပဋိပက္ခများတွေ့ရတတ်သည်။စိတ်ကြည်သာနေချိန် ပြုံးရွှင်၍ တစ်ပါးသူကို
သဘောထားကြီးခွင့်လွှတ်တတ်သလောက် အငြိုးထားမိသောကာလတွင် သဲကြီးမဲကြီး
ချစ်သူကြားကြုံမည်။ ဘဝကို အနစ်နာခံ စွန့်လွှတ်၍ ချစ်တတ်သည်။
အသိုင်းအဝိုင်း ဘဝမတူ​သောသူနှင့် ချစ်မည်။ ယုံစားလွယ်၍
ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟူသည်ကား မိမိက ထားရှိရန်မလို။ မိမိကို ချစ်လာသောသူအား
အခြေအနေကိုလိုက်၍ လိုအပ်သလို တုံ့ပြန်ရန်သာဖြစ်သည် ဟူသော နှလုံးသား
တူရာသီဖွားများသည် အသည်းမာ၍ တစ်ပါးသူအပေါ် ချစ်ရန်အလွန်ခက်ခဲသော
အေးတိအေးစက် နှလုံးသားအချစ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟု
ဖော်ကျူးထားပြန်သည်။ဤရာသီဖွားများသည် မျှတသော သဘာဝ နှစ်လိုသော
ထူးခြားချက်မှာ ဥာဏ်မြင့်သော ပညာအတတ်ထူးချွန်သောသူတို့ကို ဦးစားပေး၍
မိမိကအနစ်နာခံရမည်ဆိုပါက ဘာကိုမျှမလုပ်။သားချင်းအတွင်း ကျန်းမာ
ရေးမကောင်းသူ ဆိုးသွမ်းသူများကြောင့် မိမိအချစ်ရေး နှလုံးသားရေးတွင်
အမှန်တရားလုံးဝမရှိသော နှလုံးသားကို ပိုင်ဆိုင်သည်။
ခွင့်လွှတ်ခြင်းတို့ပေါင်းစည်းထားသည့် အလွန်တန်ဖိုးရှိသော အရာသည်
အချစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး တစ်ပါးသူမဆိုထားနှင့်မိမိကိုယ်မိမိ ပင်နားမလည်
နိုင်သော ထူးခြားသည့် နှလုံးသားပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်ဟု ကမ္ဘာ့
နက္ခတ်ပညာရှင်ကြီးများက တညီတညွတ်တည်း အဆိုပြုသည်။
အချစ်ကြီးသော ၊အမျက်ကြီးသော နှလုံးသားမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်သူဟု
သဘာဝရှိသည်။ကောင်း၊ဆိုး၊မှန်၊မှား လုပ်သင့် မလုပ်သင့်စသည့် အစဉ်အလာအရ
သတ်မှတ်ထားချက်များကို လုံးဝလက်မခံခြင်းမရှိ။ မိမိရင်ထဲမှ ကောင်းသည်၊
မှန်သည်ဟုထင်လျှင် ခေါင်းအေးအေးနှင့် တဇွတ်ထိုး လုပ်တတ်သည်။
မိမိခံစားချက် ခံယူချက်ကို ဦးစားပေးမည်။ ကိုယ်ပိုင်အဘိဓမ္မာနှင့် မဖြစ်မနေ
လုပ်တတ်သည်။ မိမိစိတ်ထဲ၌ရှိသော အရာများကို တစ်ပါးသူအား
ဖွင့်ပြောတိုင်ပင်ခြင်းမရှိ လျှို့ဝှက်စွာ သိုသိပ်၍ မဖြစ်မနေ လုပ်တတ်သော
အလွန်အချိန်ယူတတ်သောလည်း ဆုံးဖြတ်ပြီးပါက လုံးဝ
ဥပေက္ခာပြုတတ်သည်။ဥပေက္ခာနှလုံးသား ပိုင်ရှင်ဟုလည်း သတ်မှတ်နိုင်သည်။
မိမိချစ်သူက အမှာအယွင်းတစ်စုံတစ်ရာ ပြုလုပ်ပါကလည်း
ဒေါသအမျက်ပြင်းစွာဖြင့် လုံးဝခွင့်မလွှတ်။နှလုံးသားထဲမှ အပြီးအပိုင်
ထုတ်ပစ်ပြီးဥပေက္ခာပြုလိုက်မည်။ ပင်ကိုသဘာဝတွင် အလွန်ထူးခြားသည်။
ပြန်မပြော၊ နားမထောင်၊ တစ်ပါးသူတားဆီးသည့် ကိစ္စကိုမှ လုပ်လိုသည်။
အားနည်းသောသူဘက်မှ ရပ်တည်မည်။ အလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသည်မှာ
မေတ္တာစိတ်ပြောင်းလဲလွယ်သည်။ ခံစားချက်ကို မျိုသိပ်တတ်သည်။ မိမိ ဘက်မှ
တတ်အားသရွေ့ပေးဆပ်သည်။ သည်းခံသည်။ ခံနိုင်စွမ်းကုန်သောအခါ အရွဲ့တိုက်မည်။
အလွန်ချစ်ခဲ့သူကိုပင် စွန့်ပစ်မည်။ ခွဲခွါသောအခါတွင်လည်း သံယောဇဉ်
လုံးဝမရှိသလောက်အောင်ပင် ဖြစ်မည်။ နောက်တစ်ယောက်တွေ့ပြီဆိုကလည်း
သူတစ်ဦးတစ်ယောက်အား မေတ္တာရှိ ချစ်မိပြီဆိုကလည်း အခြားသော သူများကဲ့သို့
မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်များကို ဖွင့်ပြောလေ့မရှိ။ တစ်ဦးတည်း လျှို့ဝှက်စွာ
ခေါင်းကြီးငုံ့ ဘေးချင်းယှဉ်ထိုင်ကာ စကားမပြောဘဲ ဂွတိဂွကျ
မည်သို့ဆိုစေကာမူ ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားများ၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအပေါ်အမြင်တွင်
မတူသော ဆန့်ကျင်ဘက် နှစ်ဦးကို ပေါင်းကူးဆက်ဆံပေးနိုင်သော
တစ်သားတည်းဖြစ်အောင် လုပ်ပေးနိုင်သောအရာသည် အချစ်ဖြစ်သည်ဟု
ဓနုရာသီဖွားတို့၏ နှလုံးသည် သနားလွယ်၊ ယုံလွယ်၊စိတ်ညွတ်လွယ်တတ်သည်ဟု
ကမ္ဘာ့နက္ခတ်ပညာရှင်များက တညီတညွတ်တည်း သတ်မှတ်ထားကြသည်။
ဂရုထားရမည်။ အောင်မြင်သော အိမ်ထောင်ရေးကို ရရှိမည်။ လေးနက်သော
နှလုံးနှင့် ချစ်မည်။ ခွင့်လွှတ်တတ်သည်။
ဆုံးဖြတ်ချက်ချတတ်သည်။အလွန်သီးသန့် နေလိုသည်။ မိမိ သီးသန့်ကမ္ဘာလေးအတွင်း၌
သဘာဝရှိသည်။ အချစ်လွန်ကဲခြင်း နားလည်ခွင့်လွှတ်မှုလွန်ကဲခြင်းတိုကို
လျှော့သင့်သည်။တစ်ပါးသူက တစ်စုံတစ်ရာ တိုးတက်သွားအောင် အကြံအစည်နှင့်
ထိန်းချုပ်နိုင်သော အင်အားမရှိပေ။လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကို ဆက်ဆံသောအခါ
မယုံသင်္ကာစိတ်ဖြင့် စတင်ဆက်ဆံတတ်သည်။ တစ်စစ ယုံစားလာသည်ဆိုကလည်း သူတစ်ပါး
မိမိတွင်လိုအပ်နေသောအရာများနှင့် ခံစားနေသော အဆိုးများကို
အခြားသူတစ်ဦးတစ်ယောက်အပေါ်တွင် မဖြစ်စေလိုပေ။ လိုအပ်နေသော
ပေးဆပ်သင့်သည်ဟု သတ်မှတ်မည်။အနိုင်ယူသွားခြင်းအပေါ် ခွင့်လွှတ်ရန်
အမြဲရှင်သန်နေသော အချစ်နှလုံးသား ဒဿနကိုပိုင်ဆိုင်သည်။
အစွဲအလမ်းကြီးခြင်း တစ်ဖက်စွန်းကျလွန်းခြင်းများကြောင့် နှလုံးသားရေးရာ
ချစ်ဒုက္ခတို့ ကြုံတတ်သည်။ သန့်စင်သော နှလုံးသားနှင့် တစ်ပါးသူအပေါ်
မေတ္တာထားလင့်ကစား ကံဇာတ်ဆရာမှ မိမိအား အလွမ်း၊ အဆွေးသမားဖြစ်အောင်
မေတ္တာရှင်နှင့်တွေ့ပြီး ဘဝတွင်အေးချမ်းသွားမည်။မေတ္တာရေးတွင် လေးလေးနက်နက်
သစ္စာရှိရှိနေတတ်သည်။ ချစ်သူအပေါ် အခွင့်အရေးမယူ။အနိုင်မယူတတ်။ မိမိကသာ
အမြင်ကျယ်မည်။ သဘောထားကြီးမည်။နူးညံ့သိမ်မွေ့သော နှလုံးသားကို
ပိုင်ဆိုင်မည်။ မေတ္တာရေးတွင် နက်နက်နဲနဲ တွေးခေါ်တတ်၍ ဘဝကို
ပေးဆပ်ထားမည်။ မေတ္တာကို စာမဖွဲ့တတ်၊ နူးညံ့ပျော့ပျောင်းစွာ နှုတ်ခမ်းဖျား
လျှာဖျားမှ မပြောတတ်။ ရိုရိုးကြီး လက်တွေ့ကျကျ လုပ်ဆောင်ပြီး အချစ်ကို
စကားတင်းပြောခံရခြင်းမျာကြုံမည်။ သို့ရာတွင် အံဩလောက်အောင် မိမိ၏
ဦးနှောက်နှင့်နှလုံးသားကြား အမြဲဒွဟဖြစ်တတ်၊ တွေဝေတတ်သည်။ မေတ္တာ
တရားနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ဓာတ် တက်လွယ် ကျလွယ်သည်။ မိမိနှလုံးသားသည်
သူတစ်ပါးအပေါ် အဆင်ပြေ ချမ်းမြေ့ အေးချမ်းခြင်းကို ပေးလိုသည်။
ပေးဆပ်ခြင်းနှင့် လိုက်လျောခြင်း၊ တစ်ပါးသူအပေါ် လေးနက်စွာ ဆက်ဆံခြင်း
သစ္စာ တည်မြဲခြင်းတို့ပေါင်းစည်းသောအရာ တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ယူဆကြသည်။
အရာရာရင်ဆိုင်ဝံ့သော နှလုံးသားပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။အရှက် အကြောက်ကြီးခြင်း
အခွင့်အလမ်းနှစ်မျိုး ပေါ်ပေါက်တတ်သည်။အတ္တကို ဦးစားပေး၍ မရွေးသင့်။
မိမိအား အလွန်နားလည်သောသူနှင့် လက်တွဲသင့်ပေသည်။
နှုတ်မှ ချစ်ခြင်းမေတ္တာစကား စာဖွဲ့ခြင်းမရှိ လက်တွေ့ကျကျ
ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် အနုစိတ် မိမိအချစ်ကို ပုံဖော်တတ်သည့်
အချစ်အနုပညာများ ဖြစ်သည်။ သူတစ်ပါးပြောလာသည် ဝေဖန်လာသည်ကို
လုံးဝဂရုမစိုက် ။ မှန်သည်ထင်သည်ကို လုပ်၍ ချစ်သူဘက်မှ ထာဝရတည်သော
Labels: ရာသီဖွားတွေရဲ့ အချစ်
မြတ်သောအကျင့်နှင့် ပတ်သက်သော စကားများ
******* ပန်းကလေး အမြဲလိုလို ဖတ်မိတဲ့ စာအုပ်ထဲကပါ........... ******
1။ (သန္တ)ခေါ်တဲ့ သူတော်ကောင်းဖြစ်ချင်တဲ့သူသည် (3)မျိုး ငြိမ်သက်ရမည်။
* * ** *** * *
2။ မရှိတာထက် မသိတာခက်။
သင်မှသိ၊ သိမှကျင့်၊ ကျင့်မှရ။
* ** * ** *** ** *
* ** ** ** *** *** *
* * *** ** *** ** *
1. နေ့စဉ်းကောင်းမှု ကုသိုလ်များတွင် မမေ့မလျော့ စဉ်းစားပါ။
2. လူဖြစ်လာလျှင် လူ၏တန်ဖိုးကို သိအောင်ကြိုးစားပါ။
3. မည်သူတရားပျက်ပျက် သင်မပျက်ပါစေနဲ့။ (သတိထားပါ)
4. သင့်ကို အကြောင်းပြုပြီး သူတစ်ပါးစိတ်မဆင်းရဲပါစေနဲ့။
5. မိဘကို စားနိုင်တုန်းအချိန်ကြွေးပါ၊ သေမှ မငိုပါနဲ့
6. သူတစ်ပါးအပြစ်ကို မပြောပါနဲ့၊ ကိုယ့်အပြစ်ကိသာ ရှုပါ။
7. ဗြဟ္မစိုရ်တရား အမြဲပွားပြီး။ ကိုယ်တွင်းသီလတရား မြဲပါစေ။
8. အလိုက်သိပါ၊ အားနာပါ၊ အရှက်အကြောက်ရှိပါ။
9. ကြီးသူကို ရိုသေ၊ ရွယ်တူကို လေးစား ငယ်သူကို သနားပါ။
10. မစူးစမ်း မဆင်ခြင်ပဲ မပြောပါနဲ့၊ မလုပ်ပါနဲ့။
11. နေရာတိုင်းမှာ စိတ်သဘောကြီးကြီးထားပါ။
12. နိုင်လိုသူကို အရှုံးပေးက စိတ်နှလုံးအေးမြသည်။
13. စကားပြောသောအခါ မျှမျှတတ ပြောဆိုပါ။
14. မိမိကိုယ်ကို နေ့စဉ် စစ်ဆေးပြီးမှ ကြီးပွားနိုင်သည်။
15. မကောင်းတဲ့ အကုသိုလ်စိတ်ရိုင်းစိတ်မိုက်များကို ပယ်ရှားပါ။
16. သူတစ်ပါး ကြီးပွားချမ်းသာတာကို မနာလို၊ မရှုစိမ့်၊ မရှိပါစေနှင့်။
17. နေရာတိုင်းမှာ ကိုယ်ချင်းစာတရား များများထားပါ။
18. မိမိကိုယ်ကို ဆုံးမခြင်းကသာ ကောင်းသည်။
19. မာနကို နှိမ့်ချ၊ လူ၏ တန်ဖိုးကို မြှင့်တင်ပါ။
20. အရာရာမှာ စေတနာသန့်သန့်နှု့် စိတ်ကောင်းတစခုထားပါ။
Posted by နှင်းပွင့်လေး at 10/28/20090comments Links to this post
Labels: တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော စကားများ (3)
1။ သတိဆိုတာ အာရုံများနှင့် ဆက်ဆံတယ်။ သမာဓိဆိုတာ အာရုံတစ်မျိုးတည်းနဲ့ပဲ ဆက်ဆံတယ်။ သတိကို အရှိန်ရလာအောင် လုပ်ပါ။ သမာဓိက သူ့အလိုလိုဖြစ်သွားမယ်။ ကိုယ်က အတင်းလုပ်စရာ မလိုဘူးနော်။ သတိကိုသာ အရှိန်ရလာအောင် လုပ်ရမယ်။
* * * * ** * * ** ** * ** ** ** * ** ** * ** ** * **
2။ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ ဆိုတာက၊
* * * * ** ** ** * ** * ** ** * ** * ** *
3။ သတိတရားနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြောရရင်၊ သတိတစ်လုံး လက်ကိုင်သုံး၊ ပြုံးပြုံးလွန်ချမ်းသာဆိုသော စကားအတိုင်း နေရာတကာမှာ သတိဟာ တမံပဲ။
* * ** * ** *** * ** *** ** **
4။ သတိမြဲမြံ၊ ပစ္စုပ၌န် မှတ်ရန် အလုပ်ချိန်
သတိ၊ သတိ၊ အစဉ်ရှိ၊ မိမိ အကျိုးရ။
5။ စိတ်မပုတ်အောင် သတိဆောင်၊ သိုလှောင်သိမ်းပြီးသုံး။
သတိနှင့်သာ၊ သိုလှောင်ပါ၊ ဘယ်ခါ စိတ်မပျောက်။
မိမိစိတ်ထဲ သတိစွဲ၊ အမြဲအရောင်တောက်။
* * * ** * * ** * ** * ** * ** *
6။ သတိရှေ့သွား၊ ပြုသူကား၊ ကြီးပွားတိုးတက်ရာ
သတိကင်းမဲ့၊ မြုတုံခဲ့၊ ကဲ့ရဲ့ဖွယ်ရာသာ။
* * * * * ** * * * * * ** *
Labels: တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော စကားများ (2)
ကံ စေတနာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စကားလေးတွေ
1။ ကံကိုချည်းလည်း မတိုးနှင့်။
2။ အသက်ကြီးလေလေ၊ ကံမွဲ၊ ညဏ်မွဲလေမှတ်။
ကံမွဲတာ အရေးမကြီး၊ ညဏ်မွဲရင် နိဗဈာန်မရောက်။
3။ လူမုန်းမှာ မကြောက်နဲ့။
4။ ကံဆိုတာ၊ တစ်ခြား ရှာနေစရာ မလိုပါဘူး၊ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေဟာ ကံပဲ၊ ကိုယ်ကကောင်းတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ လုပ်နေရင်၊ ကောင်းတဲ့ကံ ဖြစ်လာမှာပဲ။ ကိုယ်က မကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ရင်တော့၊ မကောင်းတဲ့ကံပဲ ဖြစ်လာမှာ သေချာတယ်။
5။ ဖြစ်ချင်တာဖြစ်တဲ့ လောကသံသရာမှာ၊ အပိုင်လိုပါလျှင် အထုပ် ထုပ်၊ သူတော်ကောင်းများအလုပ်၊ ကောင်းတာပြုမှ ကောင်းတာရ၊ ကောင်းမှ ကောင်းစားမည်။ ကောင်းဆိုနှစ်တန် ကံစီမံ၊ ခံစံကြရမည်။
6။ မျိုးစေ့မမှန် ပင်မသန်၊
ကံ ပါမှ ခံသာတယ်၊
ကံ မပါတော့ မခံသာဘူး။
ကံ ပိန်တော့ ညဏ်မှိန်တယ်။
* * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * ** ** *
7။ ကာလကို လူမစားလျှင် လူကို ကာလစားသည်။ သူတစ်ပါးလှေကို ဖာနိုင်လျက် မိမိလှေကို မဖာနိုင်လျှင် နစ်တတ်သည်။ ရွှေဥဒေါင်းငှက် အကကောင်းသော်လည်း စအိုပေါ်ပြီး အဆိုအမြည် ခံရသည်။
8။ ကံဆိုတာ အလုပ်
* * ** * ** ** ** * ** * ** ** * ** * ** ** * *
Labels: တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော စကားများ (1)
* ♥ နှင်းပွင့်လေး ♥ *
သူငယ်ချင်းတို့ရေ ......... မင်္ဂလာပါနော် ....
နှင်းပွင့်လေးရဲ့ ဇာတိက မိုးကုတ်ပါ။ နှင်းပွင့်လေးတို့မှာ မောင်နှမ လေးယောက်ရှိတယ်လေ။ နှင်းပွင့်လေးက အိမ်မှာ အကြီးဆုံးပေါ့။ ဒါကြောင့် နှင်းပွင့်လေးက ကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့သူတွေကို ကိုယ့်မောင်လေး၊ ညီမလေးလို သဘောထားပြီး ဆက်ဆံတယ်လေ။ ဒါတောင်မှာလေ နှင်းပွင့်လေးကို အတ္တကြီးတယ်လို့ပြောချင်ကြသေးတယ်။ နှင်းပွင့်လေးက အတ္တမကြီးတက်ပါဘူး၊ မာနလဲ မကြီးဘူးနော်။ တကယ်တမ်း နှင်းပွင့်လေးကို ခင်တဲ့သူတွေက နှင်းပွင့်လေးကို အရှုးတဲ့၊ အပေါတဲ့ (ဟိ....ဟိ သူတို့ပေးတဲ့ ဘွဲ့အမည် နာမတွေလေ။ တခါတလေ အဲလိုနေရတာ စိတ်သက်သာရာ ရတယ်လေ။ နှင်းပွင့်လေးက ရုပ်ဆိုးတယ်(ရုပ်ဆိုးတဲ့ လူကတောင် အမခေါ်ရတယ်လေ) ကိုယ့်ဂုဏ်ကို ကိုယ်မြှင့်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ အမှန်တွေလေ။ နှင်းပွင့်လေးထက် ချောတဲ့လူတွေ မြင်ရင်လေ အားကျတယ်သိလား။ စကားဆိုလည်း သူများတွေ နားဝင်ချိုအောင် မပြောတတ်ဘူး။ ပြောချင်ရာကို တည့်ဒိုးပြောလိုက်တာပဲ။ ဒါပေမယ့် နှင်းပွင့်လေးမှာ ရန်သူတော့ မရှိပါဘူး။ နှင်းပွင့်လေးက ပျော်ပျော်နေတတ် တယ်။ တချို့လူတွေက ပျော်ပျော်နေတာကို မလေးနက်ဘူး၊ ပေါ့ပေါ့တန်တန်နေတယ်လို့ ထင်ကြတယ် လေ။ အဲဒီအခါကြရင်လဲ နှင်းပွင့်လေးက ဘယ်ရမလဲ တည်လိုက်တာပေါ့(မျက်နှာကို) စိတ်ကတော့ ဘယ်တည်လို့ရ မလဲနော်။ နှင်းပွင့်လေးရဲ့ အကျင့်က လူတွေ ပျော်နေတယ်ဆိုရင်လဲ ပျော်လိုက်တာပဲ။ စိတ်ညစ်တယ်ဆိုရင် စိတ်ညစ်လိုက်တာပဲ သိလား။ ဟိ ..... ဟိ (ရှုးတယ်လို့ မထင်နဲ့နော်) ဝေမျှခံစားတာလေ။ ဒါပေမယ့် နှင်းပွင့်လေး က လူတွေကို ကိုယ့်မိသားစုလိုပဲ ဆက်ဆံတယ်လေ။ ဒါကြောင့် နှင်းပွင့်လေးကို လူတွေက ပြောကြတယ်။ စိတ်ပျော့တယ်တဲ့။ ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိဘူး။ နှင်းပွင့်လေးအကြောင်းကို သိပြီးတော့ အတင်းတော့ မတုတ်နဲ့ နော်။ နှင်းပွင့်လေး မကြိုက်ဘူး။ ပြောချင်ရင် စကားကျန်ခဲ့နော်။ စိတ်ဆိုးရင်လဲ စိတ်ဆိုးတဲ့အကြောင်းပေါ့။ ဟုတ်လား။
- မုန်းလိုက်တာရှင်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့
- အမှန်တော့လည်း၊ သံသာဝဲမှာ
- မုန်းလွန်း မဟုတ်၊ ချစ်သရုပ်ကို
မျဉ်းပြိုင်ပေါ်မှာပဲ လျှောက်ဦးမည်။ ။
Posted by နှင်းပွင့်လေး at 10/26/20090comments Links to this post
ဆရာတော် အရှင်ဆန္ဒာဓိက ရေးသားတော်မူသော “မသေခင် ဘာလုပ်ကြမလဲ” စာအုပ်မှ ကူးယူဖော်ပြ ဓမ္မဒါန မျှဝေအပ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ ဤသို့ မျှဝေ လှူဒါန်းရသော ဓမ္မဒါန ကုသိုလ်သည် ဘုရား တပည့်တော်အား မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ပေါက် နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း အထောက်အပံ့ကောင်း ဖြစ်ရပါစေ အရှင်ဘုရား။
အားလုံးသော ဓမ္မမောင်နှမတို့ မမေ့မလျော့ မပေါ့မဆ မြဲမြံသော သတိတရားတို့ဖြင့် ကိုယ်စီကိုယ်ငှ ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။
Posted by နှင်းပွင့်လေး at 10/24/20090comments Links to this post
ပေးဆပ်ရင်း နဲ့ ချစ်နေမယ်
ငယ်စဉ် ကာလ ကလေး ဘဝ
ဖြူစင်စွာနဲ့ ရင်းနှီးခဲ့ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းလေးရေ...
ရာတွေဟောင်း အချိန်တွေ ပြောင်းခဲ့ပေမဲ့
ငါ့ ရင်ထဲက ချစ်ခြင်း ဘယ်သောခါမှ မပြောင်းလဲပါ
ဟိုးရင်ကတည်း က အနိုင်ယူခဲ့တဲ့ နင့် ကိုမှ စွဲလန်းမိနေတာက..
မင်း မျက်ဝန်း ရဲ့ အကြည့်အောက်မှာ ငါ က အရုပ်လေးလိုလေးပါ
မင်း နှုတ်ခမ်း က ထွက်ကျလာမဲ့ စကားလုံး တိုင်း ကို ငါ နာခံနေမှာပါ
နင် ဘာပဲလုပ်လုပ် အပြစ်မမြင်
ငါ့ မာန တွေ ကို ခဝါ ချလို့
နင် လျှောက် မဲ့ လမ်းမှာ...
ငါ့ ဘဝ ကိုနင်းလျှောက်မယ် ဆိုရင်တောင် ကျေကျေနပ်နပ် ပေးအပ်ထားတဲ့ သူပါ ..
ငါ့ ဘဝ ရဲ့ အရာအားလုံးဟာ မင်း လက်ထဲ မှာပါ
နင့် အတွက် ဆိုရင် လေ အရာရာကို ငါ ပေးဆပ်နေမှာပါ
ငါ့ အချစ် ကို နင် အသိမှတ် မပြု ရင်နေပါ...
နင့် ကို ချစ်နေတာကိုတော့ မတားဆီး လိုက်ပါနဲ့နော်
ငါ့ ရဲ့ ချစ်ခြင်း နင့် အတွက် ဆို
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အစဉ် ထာဝရ ပေးဆပ်ရင်း နဲ့ ချစ်နေမယ်..............
နင် ထားခဲ့တဲ့ ဘဝ မှာ
ငါ နေတတ်အောင် နေခဲ့ပေမဲ့
နင် နေ နေတဲ့ဘဝ မှာ နင်ပျော်ရဲ့လား...?
နင် ပျော်တယ် ဆိုရင် ငါ ကျေနပ်နေတဲ့သူပါ မောင်
ငါ့ ကို နင် အစဉ်မပြေချိန်မှာ တမ်းတလိုက်ပါနော်
နင့် အတွက် ငါ အမြဲ ရှိနေတယ် ချစ်သူ
ငါ ဟာ နင့် အတွက် မွေးဖွါးခဲ့တဲ့သူပါဟာ
သြော် နောက် တစ်ခု
သိပ် အရေးကြီးတယ် ချစ်သူ
နင် နေ-နေတဲ့ ဆီ မှာ မပျော်တော့ဘူး ဆိုရင်
အချိန်မရွေး နင် ပြန်လာခဲ့ပါ ချစ်သူ
ငါ့ ရင်ခွင်ဟာ နင့် အတွက် သော့မလိုပါ
နင့် အတွက် အမြဲတံခါးဖွင့်ပြီး နွေးထွေးစွာ နဲ့ ကြိုနေမှပါ မောင်
အပြစ်မမြင်ပါ ချစ်သူ ............
ငါ့ ရင်ထဲ က အပူ မီးကြောင့် မအေးနိုင်ပါ ချစ်သူ...
နင့် ကို လေ အားလုံးကပြောနေကြတယ်
ရက်စက်မှု အပေါင်း သရဖူ ဆောင်း
ဘီလူးခေါင်း နဲ့ မင်းသားလေးတဲ့...
အများရဲ့ စကား မယုံကြည်ဘဲ
နင့် ကို ယုံလို့ ...
ရဲရဲ ဝံ့ဝံ့ မျက်စိမှိတ် ချစ်မိခဲ့တဲ့
ငါ့ မှာတော့ လေ...
နင် ပေးခဲ့တဲ့ လွမ်းဆွတ်ဝေဒနာ
အများတကာရဲ့ မေးငေါ့ ပြစ်တင်
နင် ပျော်နေတယ် မဟုတ်လား ချစ်သူ
ငါ မျက်ရည် နဲ့ နင်ပျော်ဖို့ အတွက် ခြေဆေးမယ် ဆိုရင်တောင်....
နင့် ကို ငါ အပြစ်မမြင် ထာဝရ ခွင့်လွှတ်နေပါ့မယ် ချစ်သူ
တိတ်တခိုးနဲ့ ချစ်ခဲ့ရပါသော ကိုကို
အခြေနေတွေမတူရင် မချစ်ရဘူးလို့ ဘယ်သူတွေ စခဲ့တာလဲ
ဒီ အခြေနေတွေကြောင့် မင်း ကို ငါ စွန့်လွှတ်ခဲ့ရတယ်နော်
မတူညီ တဲ့ ဘဝ နှစ်ခု ပေါင်းစပ် ဖို့ မှ မဖြစ်နိုင်တာလေ
အချစ် ကို ရှေ့တန်းတင် ရူးရူးမိုက်မိုက် လက်တွဲခဲ့ရင်
နောင်တချိန်မှာ အချစ်မဝင် သောကမအေး
ရင်ဝယ် စိတ်နှလုံးလေး မပျော်မွေ့ ဘဲ...
မင်း မနေတတ်မှာ စိုးကြောက်တာကြောင့်
နှလုံးသား မှာ ဒဏ်ရာ မနက်ခင်...
မင်းနဲ့ ဝေးရာရှောင်ပြေးထွက်ခဲ့တာ ပါ ချစ်သူ
မင်း ကိုလေ မုန်းဖို့ မပြောနဲ့
တစ်စက္ကန့်လေးတောင် ငါ့ မေ့လို့ မရခဲ့ပါဘူးနော်
ငါ့ ရဲ့ ချစ်ခြင်းမှန်ကန်ပါလျှင် ချစ်သူ နင်ထာဝရ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ
ချစ်မိတဲ့ သူ အတွက် .............
သောင်ပြင် က ခြေရာမဟုတ် ......
ကောင်းကင် က တိမ်တိုက်မဟုတ် ......
ဲ့ သံယောဇဉ် ပုံရိပ် က
အတိတ်က ထက်ခိုင်မြဲပါတယ် ....
ဖြတ်မရတဲ့ ဝေဒနာ အချစ် ..............
တောင်းပန်ဖို့တောင် မဝံ့ရဲတဲ့ ဘဝမို့
သံယောဇဉ် တစ်ခုကို မြိုသိပ်ပြီး
သံယောဇဉ် မပြတ်တာ မဟုတ်ပါဘူး ...
အတိတ်ကို မေ့မရတာပါ ..........
မေတ္တာတရားလောက် သန့်စင်မွန်မြတ်တာ မရှိဘူးနော်။ အဖြူရောင်နှလုံးသားနဲ့ပေါ့။
Posted by နှင်းပွင့်လေး at 10/15/20090comments Links to this post
ဘ၀မှာ အောင်မြင်အောင်ုကိုးစားရင် ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ငပွေး နဲ့တင်အောင် တို့နှစ်ယောက်ကို ရန်ကုန်က သူ့ဘကြီးလှမ်းခေါ်လို့ မြို့တက်ကြတာ။
လမ်းမှာ ဟိုင်းလတ် ကားလေးတစ်စီးရပ်ထားတာတွေ့တယ် ။
ငပွေးက တင်အောင်ကိုလှမ်းမေးတယ် ။ \_"ဟေ့ကောင်ဟိုကားဘာဖြစ်တာလဲ\_"
\_"အ ပါ့ကွာ ..သူလဲဒီလောက်အဝေးကြီးပြေးလာရတာ
ငပွေး အူကြောင်ကြောင်ဖြစ်ပြီး ရပ်ထားတဲ့ကားကိုတအံ့တသြ ကြည့်နေရှာတယ်။
တစ်နေရာလည်း ရောက်ရော သူတို့စီးလာတဲ့ကားက ထိုးရပ်သွားတယ်။
\_"ခရီးသည်များအားလုံး ကျွန်တော်တို့ကားအင်ဂျင်ပူသွားလို့ ခဏနားပါမယ်။
အောက်ခဏဆင်းပြီးအပေါ့အပါးသွားနိုင်ပါတယ် \_" ဆိုတဲ့
အောက်လည်းရောက်ရော ငပွေးက တင်အောင်ကို မျက်စပစ်ပြပြီး
ရန်ကုန်ကားဂိတ်ရောက်တော့ သူတို့ဘကြီးက စောင့်နေနှင့်တာပေါ့။
\_"ငပွေးနဲ့တင်အောင် မင်းတို့ မျက်နှာလဲမကောင်းပါလား ဘာဖြစ်လာ…. \_"
ဘကြီးတောင်စကားမဆုံးသေးဘူး ... ဘကြီးလက်ကိုနှစ်ယောက်သားဆွဲပြီးပြေးလိုက်တာ
အ၀တ်အိတ်တွေ မနိုင်မနင်းနဲ့ ကားဂိတ်နဲ့ခပ်ဝေးဝေးလဲရောက်ရော …
ပါးစပ်ဖွင့်ပြီးရှုပါတယ်... ကျွန်တော်တို့ကားကျမှ ဖင်လှန်ပြီးရှုရတယ်လို့ …
ရှက်လွန်းလို့ ကားနားတောင်မနေရဲတော့ဘူး \_" တဲ့ …။
အမှတ်တရနဲ့ ဂန္ဓ၀င်လည်း မြောက်ရမယ်ပေါ့။
မိန်းမအသုံးအဆောင် ပစ္စည်းဆိုင်ကို သွားမှာမို့ ချစ်သူရဲ့ညီမလေးလည်းပါလာတယ်၊
ဆိုင်ရောက်တော့ သူကလက်အိတ်အဖြူလေးတစ်စုံ ၀ယ်တယ်။
ချစ်သူ့ညီမလေးက အောက်ခံဘောင်းဘီ (ပင်တီ) တစ်ထည်ဝယ်တယ်။
ဖြစ်ချင်တော့ ထုပ်ပိုးပေးတဲ့အရောင်းစာရေးမ အမှားကြောင့် ချစ်သူ့ညီမက
သူလည်း ဖွင့်စစ်ဆေးမနေဘဲ (ပင်တီ) ပါဆယ်ထုတ်နဲ့ စာတစ်စောင် ရေးပြီးစာတိုက်က
ကိုယ်ဘာလို့ ဒီလက်ဆောင်ကို ရွေးချယ်ရသလဲဆိုတော့ မင်းနဲ့ကိုယ် ညနေခင်းတွေ
လမ်းလျှောက်ထွက်တဲ့ အခါ မင်းဝတ်လေ့ဝတ်ထ မရှိဘူးဆိုတာ ကိုယ်သတိပြုမိလို့ပဲ။
ကိုယ်က နှိပ်ကြယ်သီးပါတာ ၀ယ်ဦးမလို့ပဲ။
မင့်ညီမက ချွတ်လို့စွတ်လို့လွယ်အောင် အဲ့ဒါကိုပဲ ၀ယ်ဖို့ တိုက်တွန်းတယ်။
အရောင်းစာရေးမကတောင် သူမလည်းဒါပဲ ၀တ်ကြောင်းနဲ့ သူကိုယ်တိုင်
အတော်ကြည့်ကောင်းပါတယ်။ သူမက အပေအစွန်းလည်း ရေဆေးရုံနဲ့ ပြောင်ကြောင်း
ဒီတစ်ခါ ကိုယ်လာရင် မင်းဝတ်ထားတာ မြင်ချင်တယ်။ တွေ့ရင်တော့လား အထပ်ထပ်အခါခါ
ကိုယ်လေမင်းလက်လေးကိုကိုင်ထားရမှ လုံခြုံတယ်လို့ ခံစားရတယ်
ခရစ်စမတ် တစ်ကျော့ရောက်ပြန်ပါပြီ.. ဒီခရစ်စမတ်မှာ တီဗွီတစ်လုံး ဝယ်ပေးဖို့ Tom က အမေကို ပူဆာတယ်။ Tom က ဆိုးပေပြီး စာလည်းမကြိုးစားတဲ့အတွက် အမေက ဝယ်မပေးချင်ဘူး။ ဒါနဲ့ အမေက Tom ကို \_"Tom ဘုရားသခင်ကို စာတစ်စောင်ရေးလိုက်ပါ။ ဒီနှစ်အတွင်းမှာ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ကောင်းမှုတွေကိုရေးလိုက်.. ဘုရားသခင်က တီဗွီတစ်လုံး လက်ဆောင်ပေးလိမ့်မယ်\_" လို့ ပြောလိုက်တယ်။
> ဒါနဲ့ Tom က ဘုရားသခင်ထံ စာရေးတော့တယ်။
> \_"ချစ်လှစွာသော ဘုရားသခင်၊ ကျွန်တော်က ဘုရားသခင်ရဲ့ အချစ်ဆုံး Tomလေးပါ။ ဒီနှစ်အတွင်းမှာ ကျွန်တော် ကောင်းတာတွေ အများကြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုဆို ခရစ်စမတ် ရောက်တော့မှာမ�@ ���8@ သင်၏ချစ်လှစွာသော သားတပည့်ကို တီဗွီတစ်လုံး လက်ဆောင်ပေးပါ\_" လို့ ရေးလိုက်တယ်။ Tom က စာကိုရေးပြီး ပြန်ဖြစ်ကြည့်တယ်။ သိပ်သဘာဝမကျတာနဲ့ ဒုတိယတစ်စောင်ကို ကောက်ရေးလိုက်ပြန်တယ်။
> \_"ဘုရားသခင်.. ကျွန်တော် Tom ပါ။ ဒီနှစ်အတွင်း ကျွန်တော် မကောင်းတာတွေလုပ်ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော် မှားသွားပါတယ်။ ဘုရားသခင် ကျွန်တော့်ကို တီဗွီတစ်လုံး ပေးမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်\_" လို့ ပြင်ရေးလိုက်တယ်။
> Tom က စာကိုတစ်ခေါက် ပြန်ဖြစ်ကြည့်ပြီး မကြိုက်လို့ တတိယတစ်စောင်ကို ရေးလိုက်ပြန်တယ်။
> \_"ဘုရားသခင်.. ကျွန်တော်ပါ.. Tomပါ။ ဟုတ်ပါတယ်.. ကျွန်တော် မကောင်းတာတွေ တော်တော်များများ လုပ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် တီဗွီတစ်လုံးတော့ လိုချင်သေးတယ်\_" လို့ ပြင်ရေးပြီး ဘုရားကျောင်းကို သွားခဲ့တယ်။ ဘုရားကျောင်းမှာ Mary and Jesus ရဲ့ ရုပ်တုကိုတွေ့တော့ Tom က စတုတ္ထမြောက် စာကိုရေးပြီး မယ်တော်မာရီရဲ့ ရုပ်တုကို အိမ်ယူပြန်လာခဲ့တယ်။
> နောက်တစ်နေ့မှာ ဘုရားကျောင်းက ဖာသာက ဘုရားသခင် Jesus ရဲ့ ခြေရင်းမှာ စာတစ်စောင်ကျနေတာကို တွေ့လို့ ကောက်ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့...
> \_"ဘုရားသခင်.. သင့်အမေ ကျွန်တော်လက်ထဲမှာ သင့်အမေကိုတွေ့ချင်ရင် ကျွန်တော့်ကို တီဗွီတစ်လုံး မြန်မြန်ပေးပါ\_" ဟူတည်း။
ကြည့်မှန်ရှေ့တွင် ရောက်ရှိနေတဲ့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် စကားပြောနေကြ စဉ်ဖြစ်ပါတယ်၊
ပထမသူငယ်ချင်း- ငါ့ရဲ့အပြစ်တစ်ခုက ကိုယ့်ကိုကိုယ် အထင်ကြီးတာပါ... မနက်တိုင်း ငါမှန်ကြည့်တယ်။ ငါဘယ်လောက် လှတယ်ဆိုတာ သိရတယ်.. အဲဒါအပြစ်လား၊
ဒုတိယသူငယ်ချင်း- အဲဒါအပြစ် မဟုတ်ဘူး၊ ဒါမှားယွင်းမှု။
ဘဒ္ဒန္တ သီရိန္ဒာဘိဝံသ ၊ မစိုးရိမ်ဆရာတော်ကြီး ၏ ဩ၀ါဒကထာကို ပြန်လည်ဖော်ပြပါသည်၊
Posted by နှင်းပွင့်လေး at 10/09/20090comments Links to this post